Home / Foset Guide / Matte Black Dọọ Down Kitchen foset
2020 / 10 / 27 nhazi ọkwaFoset Guide 4037 0
Ọtụtụ ndị ugbu a mgbe ha na-achọ ijupụta n'ụlọ ha ọhụrụ na-amalite ịchọ ihe ndị dị ịtụnanya ma na-atọ ụtọ. Mana abia na ebe ana esi nri, ndi mmadu choro ihe ohuru na nke ohuru, ihe puru ime ka ebe nile di ndu ma weta anya ahu nke oma. Ekwu okwu banyere kichin dị mkpa echiche maka inwe a ojii kichin kichin na-ama jijiji n'etiti ọtụtụ mpaghara ụwa.
Ndị mmadụ na-enwe ihe mberede na igwe anaghị agba? Ee e, ọ bụghị ma omume dị ka anyị si mara ya na-agbanwe agbanwe mgbe niile. A na-ebute àgwà dị omimi nke kichin gị site na iji agba agba ojii na ihe gbara ọchịchịrị karịa agba ojii matt agba? Ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji hụ echiche nke inwe otu na kichin ha. Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike igwu ala mgbe ahụ, ihe ndị a bụ ole na ole ị ga - agụrịrị ma ọ dịkarịa ala otu oge tupu ịwụnye na ngwa ngwa ọ bụla;
1. Na-akọwapụta eriri unyi
Ọ bụrụ na ị nwere mpe mpe mpe akwa na tebụl gị karịa iji ụcha achacha ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara agaghị eme ha ikpe ziri ezi. Ọ bụghị naanị na ọdịdị ha ga-agbadata mana ohere nwere ike ịbụ na ọtụtụ mmadụ agaghị enwe ike ịghọta ihe dị iche ma ma ọ bụ na ọ nweghị akara mgbo ọkụ ọ bụla. Ma site na eriri ojii ebe a na-ere kichin, ọ bụghị naanị na rịbọnụ ka a ga-eme ka ọ pụta ìhè mana ọ ga-agbakwunye ụcha na-efu efu.
2. Dual arụmọrụ
Ọtụtụ n'ime pọmpụ kichin ojii ndị a na-eji ike arụ ọrụ abụọ nke iji ya eme ihe na iji kpochasị arịa dị iche iche. Ntughari nke 360 ​​ga-enye ohere nhicha dị mkpirikpi na iji facet mee rinsing ma ọ bụ nhicha nke countertops na ebe ndị ọzọ metụtara.
3. Maka imepụta isi okwu
Otu n'ime ọtụtụ ihe kpatara ị ga-eji nweta pọmpụ nke kichin bụ imepụta ebe a na-esi nri na kichin nke pụtara na ọ nwere ike ịmepụta echiche pụtara ìhè nke ịdị jụụ ma dị mma na kichin gị. Enwere ike iji ya mee ihe maka ịmịnye ihe ịchọ mma ndị ọzọ mara mma na kichin gị dị ka taịl ọcha, ọkụ ọgbara ọhụrụ, na ọtụtụ ndị ọzọ. Isi okwu bụ na ị nwere ike iwepụta isi okwu ọ bụla nwere ike ịnwe ọkụ na kichin ojii n'ụlọ gị.
4. Mee ka echiche gị nke teknụzụ dịkwuo mma
Ruo ole mgbe ka ị ga-anọ tọrọ atọ n'oge gara aga? Ogologo oge ole ka ịwụnye ụdị ọhụụ ọhụụ ọhụụ ga-ezuru gị? Ọ bụ ya mere iji tọọ uto gị na ihe na-akpali akpali na ihe na-digitally na-eburu ijeụkwụ ọ dị mkpa na ị ga-aga maka kichin kichin ojii, ọ nwere ike bụrụ naanị ihe ị na-efu efu mgbe ị na-emepụta ime nke kichin gị.
Ndị a bụ ihe mere ị ga-eji kọwaa ihe kpatara ịnweta ọkpọ ojii na kichin gị bụ ihe ga-enwerịrị, edozila otu ihe ahụ anaghị edozi, wee si na ihe ọhụrụ na nke oge a na n'otu oge bara uru maka ojiji gi.
Nke gara aga :: Họrọ igwe eji agba mmiri nke nwere ọtụtụ ọrụ ga-agbaso usoro ibi ndụ ugbu a Osote: Ebee ka m nwere ike ịchọta fosetị kichin kacha mma?
2021 / 01 / 10 908
2021 / 01 / 10 639
2020 / 12 / 21 5132
2020 / 11 / 19 4451
2020 / 11 / 19 4063
2020 / 11 / 18 4343